I-Al Ahly kaPitso emdlalweni owandulela owamanqamu | Scrolla Izindaba
I-Al Ahly kaPitso emdlalweni owandulela owamanqamu
I-Al Ahly kaPitso Mosimane izobhekana nompetha base-Europe i-Bayern Munich emdlalweni owandulela owamanqamu wendebe yomhlaba ye-FIFA. Iziqhwaga zaseGibhithe zishaye ingubo yase-Qatar i-Al-Duhail ngegoli elilodwa eqandeni ngoLwesithathu ukuzibekisela indawo kuma-semis.
Izimbangi zabo ezilandelayo ngompetha be-Bundesliga i-Bayern Munich ehlaze iziqhwaga zase-Spain i-Barcelona ngamagoli ayisishiyagalombili kwamabili emdlalweni owandulela owamanqamu. I-Bayern izibekisele indawo kwidebe yekilabhu yomhlaba ngokushaya i-Paris Saint Germain ngegoli elilodwa eqandeni kowamanqamu we-UEFA Champions League ngonyaka odlule.
Lokhu kuzoba wumdlalo wesibili weqembu uMosimane eqhamuka kwindebe yomhlaba njengomqeqeshi. Okokuqala waba ne-Mamelodi Sundowns ngowezi-2016 nokwamenza waba nguye kuphela umqeqeshi waseNingizimu Afrika emlandweni ukuba kulo mqhudelwano.
I-Al Ahly igcine ukubonakala kulo mqhudelwano okweshumi futhi lokhu kuzobe kungekona okokuqala ukubhekana namaJalimane.
“Sesiyayazi i-Al Ahly. Bangabanqobi be-African Champions League, ngakho-ke bekungeke kube umdlalo olula nhlobo,” kusho ukaputeni we-Bayern kanye nonozinti uManuel Neuer kwabezindaba ze-FIFA.
“Kwakunjalo nangowezi-2013. Akulula kakhulu ukudlala namaqembu ongawazi kahle.”
Kube neqembu lase-Afrika eselike lahlabana ngendebe yomhlaba ingasaphathwa eyokudlala kowamanqamu. Uma kwenzeka uMosimane enza okungacabangeki washaya ompetha base-Europe wadlulela kowamanqamu uzobhala igama lakhe ezincwadini zomlando zalo mqhudelwano.
Lo mdlalo uzobanjelwa e-Al Rayyan Stadium, e-Qatar ngoMsombuluko ngo-8 ebusuku.
Umthombo wesithombe: @Shakesrampedi